बिहेको १५ दिनपछि बेहुलीको यस्तो क’र्तुत देखेर बेहुला च’कित, सबै परिवार परे छक्क ! – List Khabar
Home / समाचार / बिहेको १५ दिनपछि बेहुलीको यस्तो क’र्तुत देखेर बेहुला च’कित, सबै परिवार परे छक्क !
बिहेको १५ दिनपछि बेहुलीको यस्तो क’र्तुत देखेर बेहुला च’कित, सबै परिवार परे छक्क !
admin December 28, 2021 समाचार Leaveacomment 84 Views
उत्तर प्रदेशको गो’रखपुर जिल्लाबाट एउटा अ’चम्मको खबर आएको छ । जहाँ एक परिवारले बेहुलीको आगमनको खुसी मनाइरहेको थियो । तर विवाह भएको १५ दिनपछि बेहुलीको पर्दाफास भएको छ। ड्रे’सअप गर्दा उनले आफ्नो सत्य लुकाउन सकिन्न । यति ठूलो ठगी देखेर बेहुला र उनको परिवार छक्क परे । कुरा स’म्ब’न्धवि’च्छेदसम्म पुग्यो ।
वा’स्तवमा विवाहको १५ दिन पछि थाहा भयो कि दुलहीको टाउकोमा नै थिएँ उनि पुरै कपाल बिहिन रहेछिन। बेहुलाका परिवारले बालिका र उनका बाबुआमालाई ठगी गरेको आरोप लगाउँदै स’म्ब’न्ध तो’डेका छन । वि’वाह भएको १५ दिनपछि स’म्ब’न्ध तो’डे’को भन्दै बेहुलीका परिवारले बेहुलावि’रुद्ध मु’ द्दा दायर गरेका छन् ।
यो अ’चम्मको घट’ना पीपीगञ्ज क्षेत्रमा भएको हो। जहाँ १५ दिनअघि दुवै परिवारले खुसीसाथ विवाह गरेका थिए । सबै राम्रै चलिरहेको थियो । दुलही दुई साता स’सुराको घरमा बसिन् । उनको टाउकोमा कपाल थिएन दुलहालाई अलिकति पनि कल्पना थिएन कि उनको पुरै कपाल नै छैन। एक दिन बेहुलीले लुगा लगाउने क्रममा टा’उकोबाट कपाल ख’स्यो त्यसपछि सबै परिवारलाई यो कुरा थाहा भयो ।
बेहुला र दुलही प्र’हरी चौ’की पुगेपछि बिहीबार दुवै पक्षका मानिसहरू आ–आफ्नो उजुरी लिएर पीपीगञ्ज प्रह’री चौकी पुगेका थिए । एसएचओ सत्यप्रकाश सिंहले भने- युवतीको टाउकोमा कपाल नदेखिएका कारण उनका श्रीमानले उनलाई घरबाट निकालेका हुन् । दुवै पक्षबीचको वार्ताबाट समाधान नभएमा मु’द्दा दर्ता गरी कारबाही गरिने छ
Previous फेरी मौसम बिग्रियो : हिमपात र देशभर पानि पर्ने
Next टिकटक बनाउन उमेर नमिलेको भन्दै हवल्दारकि श्रीमती आइफोन पठाइदिने केटासँग भागेको खुलासा (भिडियो हेर्नुस्)